1. kodiarana fametahana kodiarana: tsara ny fahatsapan-tena, tsy mora ny manakana, mahay mandanjalanja ary tsara tsara, fa ny fatin'ny fatorana dia manana hery tsy ampy, tsy mahavita firavaka amin'ny diamondra, tsy mahatohitra hafanana ary manohitra fanoherana, ka tsy izany mety amin'ny kodiarana mifangaro, tsy mety amin'ny fikosoham-bidy mavesatra。
2.Ny kodiarana vy dia tsy maranitra, fatorana ny résandry fa ambany ny fihazonana endrika noho ny elastika avo.
3. kodiarana vita amin'ny kodiarana seramika: volom-bolo avo, matevina avo, rafi-pandaminana azo atao (azo atao moto lehibe), tsy mifatotra amin'ny metaly; fa maloto
Fivarotana metaly: resin-doko: fampidirana metaly metaly-fampiasana metaly metaly hanovana ny fikorontanan-tsimihetsika resin binder Miompy metaly-seramika: fototry metaly, fampidirana seramika-tsy vitan'ny fanoherana ny matrix metaly, tsara ny fitrandrahana elektrika sy enta-mando. fa koa ny brittleness amin'ny seramika.
Noho ny hamafiny, ny diamondra dia mety amin'ny fametrahana ireto fitaovana manaraka ireto:
1. Ny karbônina rehetra simenitra
3. seramika sy oksizenina tsy oksida
5. Alika amin'ny hamafi-paka
6. safira sy fitaratra
9. Composite fibra hamafa
Satria ny karbonina dia ahitana karbonina madio, dia tsy mety amin'ny famoahana fitaovana vy. Ny mari-pana ambony mandritra ny fikosoham-bary dia hahatonga ny vy sy diamondra ao amin'ny vy izay manaporofo sy hanitsoka ny singa diamondra.
Familiana kodiarana ho an'ny fitaovana famonosana, Fomba fikosoham-bary diamondra ho an'ny tungeta karbàla, Maitso kodiarana ho an'ny famonosanana, 5inch famatorana kofehy famatorana kodiarana ho an'ny famonosana fitaovana famonosana baoritra, Carbide boribory ny vatan-tsolika vita amin'ny vy manapaka, Fanadiovana kodiarana diamondra / Cbn fanadiovana kodiarana ho an'ny fitaovana fanangonam-bolo,